Dhugaan kami? Manni qonnaan bultoota harka gahe hin jiru!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhugaan kami? Manni qonnaan bultoota harka gahe hin jiru!!
~ Aadde #Fatiyaa_Mohaammad, Hoggantuu Komishinii Misooma Qonnaan Bultootaa fi Qonna magaalaa Finfinnee
Manneen 23,000 akka kennaman kaabineen murteesse keessaa kan osoo hin kennamiin hafe 5000 hin caalu
~ Aadde #Sannaayit_Daamxaw, Hoggantuu Biiroo misooma manneenii magaalaa Finfinnee
Qonnaan bultoota buqqa’aniif kondomiiniyamii ‘kennaan jira’ – Bulchiinsa Finfinnee
Qonnaan bultoota finfinnee fi naannawaa Finfinneetii sababa misoomaan buqqa’aniif manneen walin jireenyaa (kondomiiniyamii) kennaan jira jedhe Biiroon Misooma fi Bulchiinsa Manneenii magaalaa Finfinnee.
(bbcafaanoromoo)–Qonnaan bultoonni sababa misoomaatiin lafa isaanii irraa buqqa’an kutaalee magaala Finfinnee Nifaasilk Laaftoo, Boolee fi Eekkaa irraa dubbisne garuu dhimmi keenya ammayyuu fala waan argate miti jedhu.
Qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buuqqa’anii deebisanii ijaaruufi deeggaruuf kan hundaa’e Komishiniin Misooma Qonnaan Bultootaa fi Qonna magaalaa Finfinnee akka jedhutti waggaa tokko keessatti qonnaan bultoota lafti isaanii irraa fudhatamee rakkinarra jiran kuma 67 galmeesse.
Kanneen keessa 23,000 kan ta’aniif manni waliin jireenyaa akka kennamu kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee Caamsaa bara 2011 A.L.I murteessus qonnaan bultoonni BBC’n dubbise hanga ammaatti nu harka hin geenye jedhu.
Biiroon Misooma manneenii Finfinnee maal jedha?
Biiroon misooma manneenii magaalaa Finfinnee garuu murtee kaabinee magaalattii hordofuun qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buqqa’an ragaan isaanii qulqullaa’ee isa gahe 23,000 ta’aniif kondomiiniyamii kennaa akka jiru hima.
Jalqaba bara 2012 irraa eegalee manneen waliin jireenyaa kennaa akka jiruu fi manneen 23,000 akka kennaman kaabineen murteesse keessaa kan osoo hin kennamiin hafe 5000 akka hin caalle hoggantuun biiroo kanaa aadde Sannaayit Daamxoo BBC’tti himaniiru.
Manneen osoo hin kennamiin hafan dabarsanii kennuunis adeemsarra akka jiru dubbatu.
Hoggantuun Komishinii Misooma Qonnaan Bultootaa fi Qonna magaalaa Finfinnee Aadde Fatiyaa Mohaammad garuu manni qonnaan bultoota harka gahe hin jiru jechuun BBC’f yaada kennanii turan.
“Carraan kan bahe Onkololeessa 2012. Hanga ammaa garuu qonnaan bulaa harka kan gahe manni tokko hin jiru. Biiroon misooma manneenii magaalaa Finfinnee waan qabatee taa’uuf ifa miti” jedhan Aadde Fatiyaan.
Hoggantuun Biiroo Misooma Manneenii magaalaa Finfinnee Aadde Sannaayit garuu kana ni waakkatu.
Kutaa magaala Eekkaa irraa Obbo Tashoomaa Fayyisaa lafti maatii keenyaa hektaarri 15 misooma kondominiyeemii Eekkaa Abbaadhootiif erga bara 2004 fudhatamee fuula rakkinaa meeqa dabarsinee as geenye jedhan.
“Yeroo lafa kiyyaa fi kan abbaa kiyyaa hektaara 15 nurraa fudhatan karee tokkotti birrii 15 nuuf herreegan. Nuti maatii gara nama 14ti. Yeroo sana hamma midhaan gahee irraa kaafanuttillee nuuf hin obsine. Midhaan keenya doozariidhaan xaragan.”
Ogummaa qonnaan ala ta’e waan hin qabneef erga lafti keenya fudhatamee rakkina hamaa keessa waggaa 8 dabarsine jedhan Obbo Tashoomaan.”Erga lafti keenya fudhatamee qonna hin qabnu, horii hin qabnu, indaaqqooyyuu hin qabnu. Ana qofa osoo hin taane qonnaan bulaa hundi harkuma duwwaa jira. Kuni dhugaa waaqnis laftis beeku.”
Isaanii fi olloonni isaanii jireenya gadi aanaa waan jiraataniif ijoollee isaanii barsiifachuufuu akka rakkatan himan Obbo Tashoomaan. Kutaa Magaala Nifas silk Laaftoo irraa kan dubbisne qonnaan bulaan biraa Obbo Taayyee Kabbadaas, qonnaan bultoonni ganda isaanii erga bara 1995 irraa lafti isaanii fudhatamaa waan tureef kaan isaanii biyya biraatti baqatanii akka deeman himan. “Nubiratti buqqaatiin tureera. Abbootiin keenyas magaala walakkaadhaa osuma dhiibamanuu qarqaratti bahani. Kaan biyya gadhiisanii kan deemanis jiru” jedhan.
Isaanii fi olloonni isaanii jireenya gadi aanaa waan jiraataniif ijoollee isaanii barsiifachuufuu akka rakkatan himan Obbo Tashoomaan.
Kutaa Magaala Nifas silk Laaftoo irraa kan dubbisne qonnaan bulaan biraa Obbo Taayyee Kabbadaas, qonnaan bultoonni ganda isaanii erga bara 1995 irraa lafti isaanii fudhatamaa waan tureef kaan isaanii biyya biraatti baqatanii akka deeman himan.
“Nubiratti buqqaatiin tureera. Abbootiin keenyas magaala walakkaadhaa osuma dhiibamanuu qarqaratti bahani. Kaan biyya gadhiisanii kan deemanis jiru” jedhan.
Qonnaan bultoonni lafti isaanii irraa fudhatame kanneen lafti muraasni hafeef akka qonna magaalaa irratti hojjetaniif bara kanarraa eegaluun deeggarsi taasifamaafi akka jirus himan.
Tibba darbe paartiin EZEMA lafti magaala Finfinnee weeraramaa jiraachuu fi manneen waliin jireenyaas seeran ala kennamaa jira jechuun ibsa baasee ture.
Warra weerara kana keessaa qooda qabu jedhamanii eeraman keessa namootni ‘lafa keenyarraa seeran ala buqqaane jedhan’ jiraachuu ibsichi ni eera.
Kantiibaa magaalaa Finfinnee kan turan injinar Taakkalaa Uumaa ammoo manneen waliin jireenyaa (kondomiiniyamiiwwan) kuma 20 ta’an qonnaan bultoota buqqa’aniif kan kenname ta’uu himanii turan.
Qonnaan bultoonni dhimma kanarratti BBC’n dubbise ‘nuti waggaa dheeraaf weeraramaa turre malee waan weerarre hin qabnu’ jedhu.
“EZEMA’n qonnaan bulaan lafa weerare nuun jedhe. Nuti garuu ni weeraramne. Lafa cittee isin harkatti hafte misoomsaa kuduraa fi muduraa dhaabaa nuun jennaan waan xiqqoon jalqabameera. Ibsi suni waan sobaati” jedhan Obbo Taayyee.
Hoggantuun komishinii misooma qonnaan bultootaa fi qonnaa magaalaa Finfinnee Aadde Fatiyaa Mohaammad, waggaa tokko keessatti qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buqqa’an kuma 67 ragaa isaanii walitti qabneerra jedhu.
“Qonnaan bultoonni kuni erga lafti irraa fudhatamee bakki isaan deeman namni beeku hin jiru, ragaa isaaniis namni beeku hin jiru, wanti hojjetamaa ture saba kana bakka kanaa haxaa’uu waan fakkaatutu raawwatamaa ture” jedhan
Qonnaan bultoonni Oromoo lafa isaanii irraa buqqa’an kunneen bakka adda addaatti faffaca’anii jiraatanis eenyu eessa akka jiru garuu sirritti quba walqabu.
Ragaan qonnaan bultoota kanneeniis odeefannuma qonnaan bultoonni kennaniin bakka jiranii barbaadamee walitti qabame jedhan aadde Fatiyaan.
Rakkoo babal’ina magaala Finfinneetiin qonnaan bultoota Oromoo irra gahe kana kan hojjetanii fooyyessuun danda’amu jiraatus waliigallisaa garuu jechaan ibsuuf waan nama rakkisu ta’uus himu.
“Waan baay’ee hojjenneefii sirreessuu malla, garuummoo miidhama isaanii kana keessa osoo waan feene gooneellee kan bakkatti deebisuu hin dandeenye (Irreversable) tahan ni jiru seenaa isaanii keessatti” jedhan.
Qonnaan bultoonni kuma 67 ragaan isaanii argame kunneen sadarkaan jireenya isaanii waldarbus namoonni 1655 garuu jireenya gadadoo fi kadhaa irratti kanneen bobba’anii turan ta’uus himu.
Yeroo ammaa kanas komishinichi namoota kunneeniif ji’a ji’aan mindaa akka argatan gochuun deeggaraa jirras jedhan Aadde Fatiyaan.
Oduun qonnaan bulaan Oromoo Naannawa Finfinnee faayidaa isaaf hin malle akka argatetti odeeffamu waan fudhatama hin qabnefi haqa qonnaan bultootaa kana dhoksuuf yaalii taasifamudha jedhu Aadde Fatiyaan.
“Qonnaan bulaan naannawa Finfinnee kuni darbee waan namaa waan mootummaa barbaaduu dhiisiitii warra haqasaallee sirritti hin gaafannedha. Sababnisaas waggaa dheeraa kana lafa irraa fudhachuu qofa miti xiinsammuu isaanii irratti hojjetamaas ture. Xiinsammuu gadi aantummaa fi moo’amuu keessaa akka hin baanetu irratti hojjetamaa ture” jedhan.
Qonnaan bultoota Finfinnee irraa buqqa’an kunneeniif wanti malu akka itti hin bu’amnee fi hin jalqabamneetti waan ilaalamuu qabu ta’uus eeran.
“Isaan abbaa biyyaati. Waan isaaniif malu ammayyuu hin arganne garuu jalqabbii gaariitu jira. Caasaa mootummaa keessa garuu warri maqaa isaaniitiin fayyadamuu barbaadu jiraachuu malu kuni sirritti qoratamuu waan qabudha” jechuun dhaaman.
Snipers are everywhere in Addis/Finfinee.“Dictators are not in the business of allowing elections that could remove them from their thrones.”
Sirna Oromummaa balfee Oromoo hidhu ni mormina!